Badeecadaha Soosaarayaasha Budada ee Buckthorn, Soosaarayaal, Dhoofiyeyaal ka socda Bolise
Soosaarida Budada Buckthorn
[Magaca Latin] Hippophae Rhamnoides Linn
[Muuqaalka] Budada Fine Jaalaha ah
[Qeybta La Adeegsaday] Miraha
4 (1 Specifiction) 20: 1-10: 40, XNUMX% -XNUMX%
1. Waxaa lagu dabaqay qeybta dawooyinka.
2. Lagu dabaqay goobta cuntada & cabitaanka.
3. Lagu dhajiyay qurxinta.
Ku saabsan Soosaarida Budada Badda Buckthorn
Badda Buckthorn Powder Extract waxay hodan ku tahay fiber-ka cuntada, borotiinka, asiidhka dufanka leh, fitamiin B12, fiitamiin C, fitamiin E, amino acids, waxyaabaha raadraaca, beta-carotene, flavonoids iyo wixii la mid ah.
Soosaarida budada badda Buckthorn waa wakiil biyaha midabeeya cuntada iyo wakiilka dhadhanka. Waxaa loo isticmaali karaa cuntooyin kala duwan, cabitaanno, cunto-kariye iyo nafaqeeyaha nafaqada leh.